Louisiana u muuqataa si ay u kordhiso ganacsiga Shiinaha - Shiinaha Yangzhong nasiib Star Daboolayo
Riixaya khibrad saliid, wax soo saarka kiimikada iyo hor u eegay duulista iyo aerospace
Louisiana doonayo inuu parlay xooggan ee saliidda iyo gaaska dabiiciga ah iyo wax soo saarka kiimikada galay xiriirka ganacsi balaariyay la Shiinaha, sida uu sheegay mas'uul sare oo horumarinta dhaqaalaha gobolka.
Don animated ayaa loo magacaabay Xoghayaha Horumarinta Dhaqaalaha Louisiana markii John Edwards Beel noqday taliyaha ee January. Animated ayaa sheegay in gobolka ay dooneyso in ay ku dhisaan warshado ay dhaqameed - tamarta iyo wax soo saarka kiimikada, iyo wax soo saarka.
"Waxaan sidoo kale kalsooni ku qaba isku duubay fursadaha mustaqbalka ee duulista iyo aerospace, IT iyo maareynta biyaha," ayuu ku yiri wareysi uu siiyay ee New York on Tuesday.
Ganacsiga u dhexeeya Louisiana iyo Shiinaha ayaa kobcaya. Tan iyo 2008, Louisiana, ayaa kaalinta koowaad ee Maraykanka ee per capita maal-gashiga shisheeye ee tooska ah, iyo shirkadaha Shiinaha ayaa qeyb weyn.
Shiinaha waa Maal labaad ee ugu wayn ee Louisiana.
Shiinaha ka dhigan suuqa top dhoofinta Louisiana ee, in ka badan $ 8.6 billion in dhoofinta ee 2014, darajada Louisiana No. 4 US dhex dhigayaa in dhoofinta in waynaha.
Animated ayaa sheegay in ay jiraan laba meelood in u muuqdaan in ay si gaar ah ugu rajo for ballaarinta ganacsiga ee ka dhexeeya dawladda iyo Shiinaha. Mid ka mid ah waa soo saara feedstock kiimikada sida methanol, taas oo loo baahan yahay in la sameeyo waxyaabaha kiimikada.
Kale oo ku lug leh wax soo saarka ee gaaska dabiiciga ah la galeen, ama Barriga Afrika, kaas oo la abuuray marka gaaska dabiiciga ah waxaa la qaboojiyey in laga jaray 259 degrees Fahrenheit.
In 2014, Louisiana xaqiijisatay maalgelin ah oo dhan $ 1.85 bilyan oo ka Shandong Yuhuang Chemical Co si ay u horumariyaan warshad methanol ee Louisiana ee St. James Parish ah. Xarunta, oo la filayo in la abuuro 400 shaqooyin joogto ah iyo qiyaastii 2,000 oo shaqo oo dhismaha ku meel gaar ah, ka yar yahay dhismaha.
"Waxaan fileynaa way iman doonaane on line iyo bilaabaan wax soo saarka ee 2017," ayuu hadalkiisa raaciyay.
Halka sicirka saliidda iyo gaaska dabiiciga ah u hooseeya hor joogsan-soo-saarka ee gobolka tamarta, qiimaha waa muruqgelin ganacsiga kiimikada.
"Dhibic The qiimaha shidaalka ayaa ka dhacay meelo ka mid ah Louisiana adag, sida aan tiro laba saare ee saliidda iyo gaaska dabiiciga ah ee dalka Maraykanka," ayaa lagu yiri animated.
"Laakiin qiimaha hooseeyo ayaa sidoo kale la abuuro fursad, tan iyo waa saliida iyo gaaska feedstock ah wax soo saarka kiimikada iyo waxaa sidoo kale loo isticmaalaa in ay awoodda xarunta in manufactures feedstock ah."
Dhaqaalaha koraya Shiinaha ayaa u baahan doona feedstock alaabooyinka kiimikada, iyo meesha istaraatiijiga ah Louisiana ee ku saabsan Gulf of Mexico ka dhigi doonaa fududahay shirkadaha Shiinaha in la dhiso wax soo saarka ee gobolada ka dibna markab sheyga dib ugu Shiinaha iyada oo loo marayo shabakad dhuun ee gobolka ama mid ka mid ah dekadaha ay, ayaa sheegay in animated.
Nidaamka dekedda Louisiana ee ka mid tan ugu xun dunida waa, iyadoo 27 barwaaqadoodu gacmeed-qabyo ah dekedaha.